Qiimaha Dhisida Talaabo Kasta oo Safarka Macaamiishaada | Martech Zone
Xidhitaanka iibku waa daqiiqad weyn. Waa goorta aad u dabaaldegi karto dhammaan shaqooyinka galay helitaanka macaamiil cusub. Waa halka dadaalka dadkaaga oo dhan iyo qalabkaaga CRM iyo MarTech la geeyay. Waa pop-the-champagne waxayna neefsataa daqiiqad gargaar ah.
Sidoo kale waa bilow. Kooxaha suuqgeynta fekerka horay-u-fakaraya waxay qaadanayaan hanaan socda oo lagu maareeyo Safarka macaamiisha. Laakiin gacan-ka-hadallada u dhexeeya aaladaha soo jireenka ah ayaa ka tagi kara farqiga u dhexeeya hawlgalka u dhexeeya saxiixa khadka tooska ah iyo wada-xaajoodka cusboonaysiinta. Tani waa halka maaraynta qiimaha macaamiisha ay ka dhigi karto farqiga oo dhan.
Waxa muddo dheer loo arkaayey inay tahay aalad iibinta wax ku oolka ah ayaa hadda sidoo kale qayb muhiim ah ka ah hubinta guusha macaamilka. Intii lagu gudajiray howsha iibinta, diirada lasaarayo qiimaha waxay u egtahay in kiis ganacsi oo cad lagahelay badeecadaada iyo waliba talaabooyinka aasaasiga ah ee aagagga saameynta ugu muhiimsan ay ku leedahay macmiilkaaga cusub. Iyadoo aan loo heellanayn qiimaha macmiilka ee ururada oo dhan, way fududahay in la seego ka faa'iideysiga aasaaskan maaddaama xiriirka sii xoogeysanayo. Sidaa darteed, haysashada qalab qiime leh oo ay u adeegsan karaan iibintaada iyo kooxaha guusha macaamiisha waa muhiim muhiim.
Dhammaan macluumaadka iyo fikradaha la ururiyey intii lagu jiray hawsha iibku waxay si isku mid ah u qiimeyn karaan maareynta korsashada iyo koritaanka isticmaalka alaabtaada. Ka dib oo dhan, guusha macaamilku waxay ku saleysan tahay fikradda ah in qiimo macno leh loo gaarsiiyo macaamiishaada.
Arrinta inta badan kooxaha guuleysta macaamiisha ayaa ah sida looga dhigo qiimahaas mid la cabbiri karo loona soo bandhigo siyaabo saameyn leh. Tani waa halka haysashada dashboard-dhab ah oo qiimo leh oo la keenay ay ka dhigi karto dhammaan farqiga u haynta iyo dib-u-gorgortanka. Halkii laga ciyaari lahaa difaaca, maciinsashada qiime dhimista, ama dulqaadka sicir bararka sare, ku tiirsanaanta maareynta qiimaha macaamiisha ayaa siineysa kooxaha guuleysta macaamiisha awood ay kaga gudbaan caqabadaha soo iibsiga ee soo jireenka ah, iyagoo wadada u xaaraya in kor loo qaado / la isweydaarsado iyadoo la adeegsanayo dunida dhabta ah ee ROI iyo qiimaha qiyaaso.
Tusaale ahaan, Adeegga, oo ah hogaamiye hagaajinta habsami u socodka shaqada, wuxuu u sameeyay aaladaha maareynta qiimaha macaamiisha ay heli karaan kooxahoodu shirkad ahaan. Tani waxay awood u siisay qof kasta oo mas'uul ka ah howlaha macaamiisha ku wajahan inuu xisaabiyo oo uu la wadaago qiyamka qotada dheer ee qiyamka. Natiija ahaan, qof kastaa wuxuu awood u yeeshay inuu ku adkeysto sheekooyinkooda, bandhigyadooda, iyo agabkooda qiimaha la qiyaasi karo ee ay ServiceNow u keento macaamiisheeda. Natiijooyinkaas awgood, shirkaddu waxay ku horumarisay heerka guusha ee hawlaha goobta hoggaanka u ah ee 1.7X waxayna labanlaabtay heerka ku xirnaanta fursadaha iibka.
Tani waa habka ugu fiican ee loo abuuro macaamiisha nolosha, taas oo ah cabbirka ugu dambeeya ee guusha sida ugu wanaagsan ee kooxahaadu u maareeyeen safarka macaamiisha. Sameynta qiimaha udub-dhexaadka isgaarsiintaada iyo dhismaha xiriirka waa qayb muhiim u ah tan. Wadahadalka qiimaha la qiyaasi karo wuxuu awood u leeyahay inuu furo heerarka cusub ee hawlgelinta. Tani waa sida shirkaduhu uga gudbaan iibiyaha una noqdaan lataliye aamin ah. Markaad sidaas sameysid, iskuday-iibinta iyo iibinta ayaa noqda wada hadallo dabiici ah oo ka dhasha aragti sare. Sidan oo kale, cilaaqaadyadu waxay noqdaan iskaashi muddo dheer ah iyo macaamil mudada dheer ah (LTV) iyo dakhliga soo noqnoqda (NRR) si weyn kor loogu qaaday.
Iyagoo diiradda saaraya qiimaha, shirkaduhu waxay leeyihiin fikradaha ay u baahan yihiin si ay uga faa'iideystaan ​​cilaaqaadka jira uguna koraan iyada oo ku saleysan faham la wadaago oo ku saabsan guusha wadajirka ah ee macaamiishooda. Xiriirinta joogtada ah ee qiimaha la soo gudbiyay, halkii markii kaliya la cusbooneysiin lahaa miiska saaran ama macaamiisha ay ka cabanayaan, waxay u saamaxdaa shirkadaha inay si hufan u dhigaan aasaaska xiriirka guul-guul nolosha oo dhan. Haddii kooxdaada macaamilka ee guuleysata ay wadahadalladooda sare ugu qaadi karaan heerka fulinta, wada hadallada cusbooneysiintu waxay diiradda saari karaan waxa aad sameyn karto marka xigta iyo ka doodista wixii horay u soo dhammaaday. Waa wax walba oo ku saabsan ku hadalka luqadda ganacsiga iyo qiimaha maaliyadeed. Tani waxay sidoo kale ka dhigeysaa isdhexgalkaan kuwo xuddun u ah qorsheynta mustaqbalka halkii laga gorgortami lahaa oo qiil looga dhigi lahaa xiriirka.
Qiimaha Waa Wadahadal Soconaya
Maaddaama baahiyaha la beddelayo, ganacsiyada ayaa isbeddelaya, ballaadhiya, iyo udub dhexaad, waxa ay macaamiishaadu ku qiimeeyaan isbeddelada waqtiga. Si joogto ah dib-u-booqashada qiyamka qiyaasta labada koox iyo macaamiishaadu waxay diiradda saaraan waa muhiim. Qeyb ka mid ah kaqeybgalka guusha macaamilku waa inay qiimeysaa oo ay dejiso jaangooyooyin cusub oo lagu guuleysto si loo hubiyo in adiga iyo macaamiishaadu aad mustaqbalka wada qorsheyneysaan. Tani waa nuxurka safarka macaamiisha la wadaago.
Adoo qiimeynaya bartamaha safarkaaga macmiilka, kooxahaagu waxay leeyihiin dariiq qasab ah oo lagu dhisayo guusha laguna abuuro wareeg wanaagsan oo qiimaha macaamiisha ah. Iyo natiijooyinka ay kujirto qiimaha guud ahaan safarka macaamilku waa cad yahay: Kordhinta qanacsanaanta macaamiisha. Hoos udhaca macaamiisha. Dhibcaha Dhiirrigeliyaha Sare ee Sare (NPS). Dakhliga Soo-noqnoqda ee WeynNRR). Dhammaantood waxay ku darayaan faa'iido khadka hoose ah oo awood leh, la cabbiri karo, oo macno leh.
Tags: CRMSafarka macaamiishasafarada macaamiishamaamulka xiriirka macaamiishahagaajinta aaladda shaqadaqalabka iibkaiibinta otomaatiga shaqadaservicenowgawaarida shaqadaHagaajinta socodka shaqada